Ihu igwe nke Spain: njirimara, ụdị na okpomọkụ | Network Meteorology
El ihu igwe nke Spain a maara ya nke ọma dị ka ihu igwe Mediterranean. Ọ bụ ihu igwe ama ama maka njirimara ya dị ka ọtụtụ awa nke anwụ na-acha, obere oge oyi na ọkọchị na obere mmiri ozuzo. Otú ọ dị, ọ bụghị nanị ihu igwe na Spain.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ihu igwe nke Spain na njirimara ya.
2 Ihu igwe nke Spain: ụdị
2.1 Ihu igwe Mediterranean
2.2 Oke ikuku
2.3 Ọnọdụ ihu igwe
2.4 Ihu igwe nke Spain: ihu igwe ugwu
Otu n'ime njirimara ndị anyị nwere nke ihu igwe nke Spain, ọ na-aga na njirimara obodo nke mba anyị nke na-eme ka ihu igwe ghara ịdị n'otu. Anyị nwere ike ịga site na ebe okpomọkụ dị gburugburu ogo 15, ebe ndị ọzọ, ha gafere ogo 40 n’oge ọkọchị. Otu ihe a na-emekwa ka mmiri zoo. Anyị nwere ike ịga site na mpaghara ebe enwere mmiri ozuzo kwa afọ nke bara uru karịa 2500 mm, ebe ndị ọzọ enwere ihu igwe ọzara ebe ọ na-anaghị agafe 200 mm kwa afọ.
Ọ bụ ezie na anyị nwere mpaghara dị iche iche nwere njirimara dị iche iche, anyị nwere ike ịchọta ụfọdụ atụmatụ izugbe na ihu igwe nke Spain. Ka anyị hụ ihe àgwà ndị a niile bụ:
Igwe na-ekpo ọkụ nke dị na ọnwa kachasị oyi na nke oyi na-adị ukwuu karịa n'ime ime ala dị larịị karịa na ebe dịka Canary Islands. Anyị nwere ike ịchọta n'ime etiti ala dị larịị ọkụ amplitudes nke 20 degrees, na agwaetiti anyị na-ahụ ọdịiche nke naanị 5 degrees.
Ofkpụrụ nke okpomọkụ na-agbadata site n'ebe ọdịda anyanwụ ruo n'ebe ọwụwa anyanwụ n'ime ime peninshula.
Ugwu ugwu nke ebe ugwu dị larịị nwere ntakịrị okpomọkụ dị ala karịa nke akụkụ ndịda.
Ọnwa nke nwere ikuku kachasị dị ala na mmiri dum bụkarị Jenụwarị. N'akụkụ aka nke ọzọ, ọnwa nke nwere okpomọkụ kachasị elu bụ Ọgọst.
Banyere okpomoku mmiri, na Mediterenian anyị nwere nkezi 15-18 mgbe na Osimiri Cantabrian ọ pere mpe.
Ihu igwe nke Spain: ụdị
Ka anyị lee ihe bụ isi ugwu na Spain nke dị: ọkachasị anyị nwere Mediterranean, oke osimiri, subtropical na ugwu.
Ihu igwe Mediterranean
Nke a bụ ụdị ihu igwe kachasị na Spen n'ihi na ọ gbasara n'akụkụ oke osimiri Mediterenian dum, ime nke peninshula na Balearic Islands. Agbanyeghị, enwere nnukwu ọdịiche dị n'etiti ụfọdụ mpaghara na ndị ọzọ, nke na - eweta nkeji atọ: ahụkarị Mediterranean, na kọntinent Mediterranean na akọrọ Mediterranean.
Mana tupu anyị ekwuo maka mpaghara ndị a, ka anyị buru ụzọ leba anya na njirimara n'ozuzu nke ihu igwe Mediterenian: Ọnọdụ Mediterranean bụ ụdị nke ihu igwe dị oke ala. Emere ya site na oyi na udu mmiri, ọkọchị ma na-ekpo ọkụ ma ọ bụ obere oge ọkọchị, na ọnọdụ na-agbanwe agbanwe na mmiri ozuzo n'oge mgbụsị akwụkwọ na mmiri.
Ugbu a, anyị ga-enyocha ụdị nke ihu igwe Mediterenian na mba anyị:
Ahụkarị Mediterranean: Nke a bụ ihu igwe Mediterenian dị ka ndị dị otú ahụ. Ọ na-ekpuchi oke akụkụ nke ụsọ oké osimiri nke otu aha ahụ, ụfọdụ mpaghara ime obodo, Ceuta, Melilla na Balearic Islands. Oge ọkọchị na-ekpo ọkụ ma kpọọ nkụ, na-enwe nkezi okpomọkụ karịa 22 Celsius C. N'aka nke ọzọ, oge oyi bụ iru mmiri na udu mmiri na-adịkarị nwayọ. Na Spain, ụkpụrụ a dị iche, n'ihi na ala ndị dị n'ụsọ osimiri na-echekwa ụsọ oké osimiri Castilian ma chee ihu n'ebe ọwụwa anyanwụ. Yabụ, ụbịa na udu mmiri na-enweta mmiri ozuzo karịa oge oyi.
Kọntinent Mediterranean: Dị ka aha ahụ na-egosi, o nwere ụfọdụ njirimara njirimara ihu igwe. Ọ bụ ebe nwere ihu igwe na-ahụkarị na Mediterenian mana ọ dị anya site n'oké osimiri, dị ka ala ala dị larịị nke Spain, nsogbu Ebro, ime nke Catalonia na akụkụ ugwu ọwụwa anyanwụ nke Andalusia. Oge oyi na-adị ogologo ma na-ajụ oyi, ọkọchị dị mkpụmkpụ ma na-ekpo ọkụ, ma ọdịiche dị n’etiti ehihie na abalị dị ukwuu. Ọ na - ejigide ọnọdụ mmiri ozuzo nke ihu igwe Mediterenian, mana o nwere oke ọnọdụ okpomọkụ kachasị njọ nke ihu igwe kọntinent. N'ihi ebe dị anya site n'oké osimiri, ihu igwe dị karịa karịa na mbụ.
Akọrọ Mediterranean: Ọ bụ mgbanwe ihu igwe dị n’etiti Mediterenian na ọzara. Ọnọdụ okpomọkụ dị elu, oge oyi na-ekpo ọkụ, oge ọkọchị karịa 25 Celsius C, yana ọnọdụ okpomọkụ kachasị n'ime ime dị oke elu, ọbụlagodi karịa 45 Celsius C. Ọdịda mmiri dị ala, lekwasị anya na mgbụsị akwụkwọ na mmiri. Ihu igwe a bụ ihe dị iche na ihu igwe na-ekpo ọkụ na ihu igwe na-ekpo ọkụ. Na Spain, ọ bụ ụdị nnọchiteanya nke Murcia, Alicante na Almería.
Ejiri oke mmiri ozuzo nke oke osimiri ma ọ bụ nke Atlantic, nke a na-ekesa mgbe niile n'afọ. Na Spen, ihu igwe a gbatịrị n’ebe ugwu na ọdịda anyanwụ, site na Pyrenees ruo Galicia. Mmiri ozuzo a na-eme kwa afọ na-akarị 1000 mm, ya mere ntụgharị ihu igwe dị ezigbo ndụ. Ọnọdụ okpomọkụ dị n'oge oyi bụ ihe dịka 12 Celsius C-15 Celsius C, ma n'oge ọkọchị ọ dị ihe dịka 20 Celsius C-25 Celsius C. Otu ihe atụ nke obodo nwere ụdị ihu igwe a bụ San Sebastián, Vigo, Oviedo, Santander, wdg. Karịsịa na ndịda Galicia, njirimara iru mmiri nke obodo ndị dị n'ụsọ oké osimiri na-eme ka okpomọkụ na okpomọkụ kachasị elu.
Ọnọdụ ihu igwe na-adịkarị na mpaghara ndị nwere ọnọdụ dị nso na mpaghara ụwa, ma ọ na-eme na Canary Islands na Spain.
N'ihi na ọ dị nso na Tropic of Cancer na ala Africa nke ụsọ mmiri, Canary Islands nwere ihu igwe pụrụ iche kpamkpam. Na Okpomọkụ na-ekpo ọkụ n'ime afọ, na-agbatị n'etiti 22 Celsius na 28 Celsius C. Mmiri ozuzo na-etinye uche na oge oyi, mana dịgasị iche site n'otu mpaghara gaa na mpaghara ọzọ ma nwee ike ịdị elu ma ọ bụ dị ala. Yabụ, na okpuru ihu igwe nke Canary Islands ụfọdụ subclimates nwere ike ịdị iche.
Ihu igwe nke Spain: ihu igwe ugwu
Ugwu ugwu kwekọrọ na nnukwu usoro ugwu: Pyrenees, Central System, Iberian System, ugwu Penibetic na ugwu Cantabrian. Ọ na-ajụ ezigbo oyi n'oge oyi ma na-ajụ oyi n'oge ọkọchị.
Ọ na-eme na mpaghara karịa 1000 m n'elu elu osimiri. Ọnọdụ okpomọkụ dị gburugburu 0 Celsius C n'oge oyi ma ọ gafere 20 Celsius C n'oge ọkọchị. Oke mmiri bara ụba, n'ozuzu n'ụdị snow ka elu na-abawanye.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ihu igwe nke Spain na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Climatology » Ihu igwe nke Spain